HTC sy Motorola dia nilaza fa tsy mampihena ny telefaonin'izy ireo taloha | Androidsis
HTC sy Motorola dia tsy mampihemotra ny fahombiazan'ny finday miaraka amin'ny bateria taloha
Eder Ferreño | | bateria, HTC, Motorola
Apple dia eo amin'ny sain'ny olona aorian'ny fampisehoana fa ny orinasa amerikana taorian'ny nanehoany izany ny fahombiazan'ny iPhone plus Ireo zokiny kosa nilatsaka rehefa nihena ny androm-piainany. Ny orinasa Cupertino dia tsy maintsy nivoaka ary nilaza fa ity dia fepetra iray natao hiarovana ny sisa amin'ireo singa.
fa, mampiady hevitra ity fanapahan-kevitry ny Apple ity, noho izany misy ny mpampiasa izay miangona hitory ny orinasa aza. Izany toe-javatra izany no nahatonga izany maro no manontany tena raha toa ka izany no mitranga amin'ny fitaovana Android. Noho izany, avy amin'ny The saika nifandray tamina marika maromaro izy ireo hanontany momba izany. mpitovo HTC sy Motorola dia namaly.
Ny marika maro an'isa marobe eny an-tsena tsy namaly ny fanontanian'i The Verge izy ireo. Mandritra HTC sy Motorola dia te-hivoaka alohan'ny hanombohan'ny tsaho miely amin'ny Internet. Samy naneho ny heviny ireo marika roa ireo fa tsy miadana ny telefaonin'izy ireo rehefa manomboka tsy mahavita intsony ny bateria.
HTC dia naneho hevitra fa tsy manao an'io karazana fanao io izy ireo. Nandritra izay Maneho ny heviny i Motorola fa tsy misy fihenan'ny fampisehoana ao amin'ny fitaovan'izy ireo. Matoky ireo fanambarana ireo ny orinasa roa tonta. Ny zava-drehetra dia manondro fa milaza ny marina izy ireo.
Amin'izao fotoana izao ny sisa amin'ireo orinasa dia tsy te-hamaly. Na dia efa fantatra aza izany Samsung sy Sony dia mandalina ny toe-javatra. Azo heverina koa fa hamoaka fanehoan-kevitra momba izany tsy ho ela izy ireo. Saingy, ny fialantsasatry ny Krismasy dia nahatonga ny raharaha hitarazoka kely.
Mandritra izany fotoana izany, marika hafa toa an'i Google na LG koa tsy mbola nihetsika, ary tsy nanolotra fambara koa fa hanao izany tsy ho ela izy ireo. Manantena izahay fa misy marika betsaka kokoa noho midira amin'ny HTC sy Motorola ary manolotra fanambarana. Azo antoka fa tsy maintsy miandry ny volana Janoary isika vao hitranga izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » HTC sy Motorola dia tsy mampihemotra ny fahombiazan'ny finday miaraka amin'ny bateria taloha
Ny rindranasa tsara indrindra handraisana ny efijery amin'ny Android
Ireo smartphone 18 izay hanana Snapdragon 845 amin'ny taona 2018